Waan ka walwalsanahay xigaaladeyda | Suomen Mielenterveysseura
Hadalheymaha isdiliddu waa mid inta badan dhib badan in si furan looga hadlo, ka hadliddeedu waxaad dareemeysaa mararka qaar iney culus tahay. Haddii qof qaraabada ka mid ah kuu sheego adiga inuu ku fikirayo ama qorsheenaya inuu isdilo, waa muhiim marka hore inaad dhageysato iyo isla markaasna caawiso oo si deggan ula sheekeeysato.
U sheeg, inuu jiro xal macquul ah oo looga badbaadi karo fikirkan isdilka iyo kurbadan xoog badan loona heli karo daaweyn xooggan. U sheeg helittaanka caawimaad iney suurtogal tahay oo uu ka heli karo bukaan socoto eegtada ama isbitaalka qeybta degdegga ee ugu dhaw. Ku dhiirigeli qaraabadaada in uu isagu iskii u raadsho caawimaad oo uu fahmo iney suurtogal tahay helitaankeeda.
Maqal waxa qaraabadaadu kuu sheegeyso.
Qiimee xaaladda oo isku day haddaad u baahan tahay in si dhakhso leh ay qaraabadaadu kuugu kexeeyaan saykolojiga degmada qeybta degdegga ama rugta caafimaadka.
Ku geesigali oo ku dhiiri inuu aamino qaraabadiisa, oo fikirkan isdilka inuu ka gudbi karo oo loo helayo xal daaweyn ah fikirkan is-haligaadda ah.
Ka daxaddar adkeysigaaga. Mar ay qaraabadaada kula joogaan wac sida lambarka telefoonka dhibaatooyinka.